Baro kaararka deynta iyo deyn | Refugee Center Online | Refugee Center Online
Ma u baahan tahay inaad soo amaahato lacag? Labada deyn iyo credit waxay ka dhigan tahay inaad soo amaahato lacag. Qaar ka mid ah amaahashada amaan badan tahay kuwa kale. Baro kaararka deynta iyo bixiyo amaahda maalin iyo hababka ugu fiican inaad soo amaahato lacag.
Waxaad isticmaali kartaa credit card si ay ugu bixiyaan waxyaabaha halkii la isticmaalayo lacag caddaan ah. Si aad u bixiso dukaanka, waxaad ka dhigi kartaa kaar caag yar oo mishiinka. Telefoonka ama internetka, waxaad geli kartaa tirada card iyo password ama Ntgahma.
Easy-to-isticmaalka iyo kaararka deynta bixinta shopping iyo biilka ammaan. Laakiin meesha khatarta ah. Haddii aadan bixin credit card aad bil kasta, waxaad bixin doontaa xiisaha. Interest waa lacagta aad bixiso in ka badan inta aad amaahatay. Muddada dheer ee aan la bixin, xiisaha kor u leeyahay. Dad badan ayaa ku America leedahay deyn badan sababta oo ah kaararka deynta.
Waxaa laga yaabaa inaad ma rabto in aad isticmaasho kaarka deynta ah sababtoo ah khatarta ah ee u galo dayn. Laakiin waxa ay noqon kartaa mid faa'iido u sabab kale: Si aad u bilowdo taariikhda credit aad. Diiwaan gelinta credit waa rikoor ah waxa ay amaahatay iyo sida mar bixisay. Waxay ka caawisaa taariikhda credit dhismaha credit wanaagsan. Haddii aad dhiso dheeli, waxaad ka amaahan kartaa lacag marka aad u baahan tahay si ay u iibsadaan wax weyn, sida gadashada baabuurka ama guri.
Sidaas waxaad u baahan tahay kaarka amaahda si ay u dhisaan taariikhda credit aad. Laakiin shirkadaha credit card aadan siin doonaa kaarka deynta ah oo keliya haddii aad leedahay isu dheelitir fiican mar hore!
Laakiin sida aan amaah kartaa taariikhda aan credit card si loo abuuro?
Waxaad bilaabi kartaa ammaan credit card. horumarka Stilt kaararka deynta ayaa la hubaa inay waddanka u soo guurey iyo dadka kale ee ay u halgamayaan in la dhiso credit. The kaararka deynta xaqiijisatay aan run ahaantii credit maxaa yeelay, waxaad lacagta isaga siin karaan mar hore, ama u yaboohday qof in aad bixiso. Laakiin waxaa kuu ogolaanayaa inaad si ay u dhisaan isku dheelitirnaan wacan. Bangiyada iyo shirkadaha credit card ayaa helay kaararka deynta sidoo kale. Stilt leeyahay dulsaarka hoose iyo ka fudud si aad u dalbato ka badan qiimaha kale ee shirkadaha. Sidaas samayn ururada shaqaalaha credit.
Si ay ugu biiraan ururka credit ah
ururada Credit waa sida bangiyada, laakiin waxaa ay isku dayayaan in ay caawiyaan dadka si ay u guulaystaan. The milkiilayaasha dhammaan xisaabaadka wada leeyihiin credit union ah. Waxay ka caawisaa ururrada credit by lacagaha deenta ama bixinta kaararka deynta dadka dakhligoodu yar yahay iyo dadka aan heysan taariikhda credit. Waxay kaa caawin doona inaad aad u badbaadiyo lacag.
Raadi credit union kuu dhow
daynta Maalinta mushaarka
amaahda degdegga ah waxaa loogu talagalay dadka u baahan tahay lacag si degdeg ah. Dadka lacagta ka soo gasho amaahiye amaahan si ay u bixiso maalinta aad hesho lacag. Laakiin amaahda degdegga inta badan keenayso dhibaatooyin dhaqaale ka daran bilaabo. Hel amaah degdegga ah waxay ka dhigan tahay in waxa aad leedahay waa lacag ka yar si loo hubiyo kor mushaar soo socda. Sidoo kale, deyn Maalinta mushaarka ka qaadaan badan oo dareenka. Si aad u leeyihiin in ay bixiyaan wax ka badan waxa ay deyn. Haddii aadan bixin on time, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso dulsaar dheeraad ah.
deyn kale Maalinta mushaarka (Pal)
Waxay ku siin karaan ururada credit doorasho fiican amaahda degdegga degdegga ah: Loan Alternative Maalinta mushaarka (Pal). Pal waa amaah muddo gaaban ah, sidaa darteed ma aha in aad si aad u hesho amaah degdegga ah. Waxaad amaahan kartaa ilaa 1000 USD ma samayn doonaan soo rogi badan oo xiiso leh. Waa in aad xubin ka tahay ururka credit muddo bil ah ka hor inta aad awoodo Pal saarka.
daymaha guryaha Real
Amaahda waa deyn in dadka ka iibsan kartaa guri. Waxaa kor u weyn oo bil kasta. Laakiin mararka qaarkood aan ka badnayn kirada bixiso waa, iyo in dhamaadka, aad leedahay doonaa gurigaaga! Waxay noqon kartaa adag si aad u hesho amaahda. Laakiin waxaa laga yaabaa in aad credit union ayaa kaa caawin.
Read ku saabsan amaahda ee muwaadiniinta aan Mareykanka
Ka caawi barnaamijyo badan ee guud ahaan Maraykanka, qaxootiga iyo muhaajiriinta si ay u bilaabaan ganacsi iyaga u gaar ah. Bixi daymaha iyo noocyada kale ee taageero, sida la talinta ganacsiga, seminaaro, dhaqaale. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah:
Sacramento, California: Albaabada ay furan yihiin
New Hampshire: daymaha Fund New New Hamilton
New York City: shaqada ee Xarunta cusub ee American
Washington, DC, Baltimore: Xarunta horumarinta dhaqaalaha iyo Laatiin
Atlanta, Georgia: On Kac Xarunta Financial
Hay'adaha Maaliyadda ee Horumarinta Bulshada (CDFIs) La mid ah ururada shaqaalaha credit. Ma doonayaan in faa'ido laga helo adeegyada ay. Halkii, ay doonayaan in ay dadka ka caawiyaan inay ku guuleystaan. Hay'adaha amaah hore wax amaahisaan lacag si ay ganacsi yar yar, ganacsiga cusub, oo guryo bay dhisan qiimaha ku haboon
Raadi CDFI kuu dhow
Miisaaniyadda si loo badbaadiyo lacag